Kooxda Real Madrid oo Leo Bonucci doonaysa bisha Jannaayo – Gool FM
Kooxda Real Madrid oo Leo Bonucci doonaysa bisha Jannaayo
Raage November 24, 2017
(Madrid) 24 Nof 2017 – Kooxda Real Madrid ayaa la sheegayaa inay raadinayso daafaca kooxda AC Milan ee Leonardo Bonucci isla bisha Jannaayo.
Fichajes.net oo soo xiganaya OKDiario, ayaa sheegaya in “xaaladda xasaasiga ah” ee ay haatan Milan marayso natiijo ahaan dhanka horyaalka ay Bonucci “ka raaridi karto inuu doonida ka boodo” iyagoo “wax kasta u samayn doona inay laacibkaa kasoo qaatan kooxdiisa”.
Webka ayaa sheegaya in Los Blancos ay aad ula dhacsan tahay khibradda ballaaran, “awoodda jireed iyo midda farsamo”, iyo weliba laacibka oo dheeli kara Champions League taasoo lagu daray inuu seegay KA2018 oo ka saacidaysa inuu awooddiisa iyaga iskugu geeyo.
Yeelkeede, waloow ay Milan woxoogaa ka qasan tahay misna ma sahlana in Bonucci laga dejiyo Santiago Brnabeu waayo xagaagii unbuu Rossoneri ku yimi €40m.
''Sida aan hadda ahay waan kasii fiicnaan doonaa'' - Cutrone oo xalay rikoor dhigay
Inter Milan oo bisha Jannaayo baadi goobaysa Benalouane